မွန်ဂိုလီးယား။ နာမည်တစ်ခုတည်းကသာဝေးကွာသော၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောတိုင်းပြည်များသို့အနှစ်တစ်ရာဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံထက်သုံးဆလောက်ကြီးမားပြီးကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်အတွက်၎င်း၏သမိုင်းကြောင်း၏အခန်းကြီးများ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သဘာ ၀ ရှုခင်းများကိုထပ်ဖြည့်ပါကသင်၏ခရီးသွားနေရာများစာရင်းတွင်ပါဝင်ရန်ထိုက်တန်သည်မှာသေချာသည်။ ဒီနေ့ကြည့်ရအောင် မွန်ဂိုးလီးယားမှာမြင်ဖို့ဘာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရန်။
ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ ရှိတယ် ရုရှားနှင့်နယ်စပ်မြောက်ဘက်နှင့်ကီလိုမီတာ ၄၇၀၀ နီးပါးရှိသည် တောင်ဘက်တွင်တရုတ်နှင့်အတူ။ တစ်ဖက်မှအခြားမွန်ဂိုလီးယားသို့ဇုန်လေးခု၊ စတက်လွင်ပြင်၊ တောင်တန်းများ၊ တောင်တန်းများနှင့်သဲကန္တာရများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
မွန်ဂိုလီးယား ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင်နံပါတ် ၁၉ ချိတ်သည်တစ်သန်းခွဲစတုရန်းကီလိုမီတာမျက်နှာပြင်အနည်းငယ်သာရှိသော။ မွန်ဂိုနှင့်အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများတွင်လူ ဦး ရေအနည်းဆုံး ၃ သန်းမျှမကနေထိုင်ကြသည်။ ထက်ဝက်သည်မြို့ပြတွင်နေထိုင်ကြသည်။ တိုင်းပြည်ကိုပြည်နယ် ၂၁ ခုခွဲခြားထားသည် ၎င်း၏မြို့တော် Ulaanbaatar မြို့ဖြစ်ပါတယ်.
စဉ် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာမွန်ဂိုဖြစ်သည်ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးဘာသာစကားမှာရုရှားဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားတွေလား။ တစ်ဝက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည် နှင့် 40% ပရိုတက်စဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းပြည်၏အခြေခံစီးပွားရေးသည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုအမြဲတမ်းကျင့်သုံးနေသောကြောင့်သူတို့၏ရိုးရာဘဝပုံစံသည်ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီနေ့မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်တောင်မှသင်တို့ကိုတွေ့မြင်မြို့ကြီးများ စုပေါင်း, အသိုင်းအဝိုင်း, အုပ်စုတစ်စုလူနေမှုပုံစံစတဲ့.
မွန်ဂိုများက တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုလဲမှသာလျှင်သူတို့သည်လွတ်လပ်စွာပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်တိဗက်၏စွမ်းအားသည်မွန်ဂိုလူမျိုးစုများကိုမိမိဘာသာဆက်လက်ရှင်သန်ရန်တစ်နည်းနည်းဖြင့်အမြဲအားကိုးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသည်နေရောင်များသောအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်၏နိုင်ငံဖြစ်သည် တစ်နှစ်လျှင်နေရောင်ခြည် ၂၅၀ နီးပါးခန့်ရှိသည်။ နွေရာသီသည်ပူပြင်း။ ဆောင်းရာသီတွင်အေးခဲနေသောကြောင့်အပူချိန်သင့်အားအေးခဲစေနိုင်သည့်အတွက်နိုဝင်ဘာလနှင့်မတ်လကြားတွင်သတိထားပါ။
အခြေခံအားဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုဒေသ ၅ ခုခွဲထားတယ်။ အနောက်၊ မြောက်၊ အလယ်၊ အရှေ့နှင့်တောင်တို့ဖြစ်သည်။ အလယ်ဗဟိုတွင်မြို့တော်၊ မွန်ဂိုလီးယားသို့ပုံမှန်တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ Ulaanbaatar သို့မဟုတ် Ulaanbaatar ။ ၎င်းသည်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ရှိပြီးမြစ်ကို ဖြတ်၍ အမြင့် ၁၃၀၀ မီတာသာရှိသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တိုင်းပြည်၏ဘဏ္andာရေးနှင့်စက်မှုနှလုံး နှင့်အမျိုးသားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အတွက် node ကို။ Genghis Khan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်ရထားဘူတာရုံတို့ဖြစ်သည် Transmongolianတစ်နိုင်ငံလုံးကိုမြောက်မှတောင်သို့ ဖြတ်၍ တရုတ်နိုင်ငံဂျင်းနင်းရှိ Trans-Siberian နှင့်ဆက်သွယ်သောရထား။
၎င်းကို ၁၆၃၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် ဘာသာရေးလူမျိုးအဖြစ်နှင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ် ဗိသုကာအပေါ်ကွန်မြူနစ် Imprint။ တကယ်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက ၁၈ ရာစုမှဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအချို့၊ Dambadarjaalin နှင့် Daschoilin၊ ဗိသုကာပညာအနည်းငယ်သာကျန်ရှိသည်။ Bogd Khan ဆောင်းရာသီနန်းတော်သမိုင်းပြတိုက်၊ ပန်းချီပြတိုက်…အခြားခေတ်တွင်နန်းတော်များထပ်မံရှိသော်လည်းတစ်ခုသာကျန်ရှိသည်။ ဆောင်းရာသီသည်မွန်ဂိုလီးယား၏နောက်ဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာ၏ပြတိုက်ဖြစ်လာပြီးလှပသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းခြောက်ခုပါ ၀ င်သောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။
မြို့၏စိတ်နှလုံးသည် Sukhbaatar ရင်ပြင်သူ၏မြင်းစီးရုပ်တု Damdin Sukbaatar နှင့်အတူ (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောတပ်ကြပ်သည် ၁၉၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင်အနီရောင်ကြပ်မတ်အစည်းအဝေး၏အလယ်တွင်ဆီးသွားခဲ့သည်။ ရင်ပြင်မှပါလီမန်အဆောက်အအုံကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Genghis Khan ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ထုကြီး Avenida Paz သည်မြို့၏အဓိကဖြစ်သည်။
Choijin Lama ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ၁၉၀၈ ခုနှစ်မှကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင်ပြတိုက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှကွန်မြူနစ်ခေတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများပျက်စီးခြင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဂန္ဓန်အဆောက်အအုံသည် ၁၉ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောမြို့တော်၏နောက်ထပ်ဘဏ္asureာရေးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထင်ရှားကျော်ကြားသောရွှေရုပ်တုဖြစ်သော Migdij Janraisig သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်တန်ဖိုးထားပြီး ၂၆.၅ မီတာအမြင့်ရှိသည်။
Ulaanbaatar မှခရီးစဉ်များစွာရှိပါသည် ကြာချိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်ကာလ၏ဖြစ်နိုင်သော။ သင်သွားနိုင်ပါတယ် Terejကြည့်ဖို့ Naadam ပွဲတော်တစ်ဦး Hustai သို့မဟုတ် Gorkhi အမျိုးသားဥယျာဉ်များဖြစ်သော Terej နှင့် de တို့တွင်သဘာဝကိုခံစားရန် Bogd Khan သို့မဟုတ်ဂွန်ဂလူးသို့မဟုတ်ခူစိုင်သဘာဝသိုက်များ။
ထဲမှာ မွန်ဂိုလီးယားအလယ်ပိုင်း သည်အခြားဖြစ်နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ် Gobi သဲကန္တာရ Safariဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ရေကန်ရှစ်ခု၊ မြင်းစီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်တိုက်ဆိုင်ပါကရောင်စုံနှင့်ရိုးရာပွဲတော်များကဲ့သို့သောရိုးရာပွဲတော်များတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ယာပွဲတော် သို့မဟုတ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တ Naadam ။
El မွန်ဂိုလီးယားတောင်ပိုင်း Gobi သဲကန္တာရကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းလင်းယုန်ချိုင့်ဝှမ်း၊ Khongor ခုံများ၊ Flaming Cliffs၊ Sum Khukh Burd အိုအေစစ်၊ Ongi ဘုရားကျောင်းနှင့် White stupa တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ လင်းယုန်ချိုင့်ဝှမ်း၊ Yol Am, ဒါကအမြောက်များပါ Dobizagdad ၏အနောက်မြောက်ဘက် ၆၂ ကီလိုမီတာအကွာ Zuun Saikhan တောင်ကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းသောမြစ်နှင့်အတူကျဉ်းမြောင်းသောတောင် Gobi ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်ရေခဲလျှာများရှိပြီးချောက်များသည်ကျောက်တုံးများဖြင့်လှပသောရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
မွန်ဂိုလီးယားတွင်အကြီးဆုံးသဲခုံသည်ခွန်ဂိုလူမျိုးများဖြစ်သည်အရှည် ၁၈၀ ကီလိုမီတာနှင့်အမြင့် ၁၅ မီတာမှ ၂၀ မီတာအကြားအများဆုံးအကျယ် ၈၀၀ မီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်သဲကန္တာရ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွန်ဆာ၏မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ Khongor မြစ်အနီးတွင်အိုအေစစ်လည်းရှိသည်။ လေနှင့်အတူသဲလေယာဉ်၏အင်ဂျင်ကိုမှတ်မိဖို့ကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အသံ ...
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, Flaming Cliff သို့မဟုတ် Bayanzag, အရေးကြီးသောတည်ခင်းည်ခဲ့သည် paleontological တွေ့ရှိချက်။ ဤတွင် 1923 ခုနှစ်တွင် ဒိုင်နိုဆောဥ၏ပထမ ဦး ဆုံးအသိုက် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မြင်ကြပြီ။ The Sum Khukh အိုအေစစ် Burd Lake ကျွန်းငယ်လေးတွင်၎င်း၏မွန်ဂိုဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်အတူ၎င်းသည်ဘဏ္aာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Tsagaan Suvarga သည်အဖြူရောင် stupa ဟုလူသိများသည်မှာမီတာ ၁၀၀ အကျယ်ရှိသောချောက်ကမ်းပါးဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ လေအားဖြင့်ထွင်းထုထားသည်။
La အနောက်မွန်ဂိုလီးယားပြည်နယ်သည်လင်းယုန်နိုင်ငံဖြစ်သည် ဒီငှက်တွေကိုကြိုက်ရင်ကံကြမ္မာပဲ။ ဤတွင်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည် Altai ရွှေလင်းယုန်ပွဲတော်၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီများသည်ထိုဒေသရှိခရီးသွား urs ည့်သည်အများစုမှာအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်မှာအေးခဲနေသောရေကန်များဖြစ်သည်။
မြောက်ဘက်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသောဥရန်တောင်၏မီးတောင်ထဲသို့သင်သွားရောက်နိုင်သည်အကျယ်မီတာ ၆၀၀၊ အနက် ၅၀ နက်သောကန်ငယ်နှင့်အချင်း ၂၀ မီတာရှိသည်။ အစိမ်းရောင်သစ်တောများနှင့်ဝံများ၊ သမင်များနှင့်ဘဲများနှင့်အတူ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ အကာအကွယ်နှင့်လှပသောareaရိယာဖြစ်ခဲ့သည်။ မြောက်ဘက်တွင်မြို့တော်နှင့် ၃၆၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိပြီးအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအသေးစားဘုရားကျောင်း ၂၇ ခုခန့်ရှိသည်။ သူက အမရပူရကျောင်းတော်.
မြောက်ဘက်တွင်လည်းနေထိုင်သည် 30 ခြေသလုံး Tsaatan မိသားစုများshaman ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဘိုးဘွားထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးနှင့်အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်၊ Huvsgul ရေကန်။ ဤရေကန်သည်အခြားiantရာမရေစီးကြောင်းဖြစ်သော Baikal ရေကန်၏အဓိကမြစ်လက်တက်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသည်။ တောင်များနှင့်သစ်တောများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ရှုခင်းသည်နိုင်ငံ၏အထွေထွေရှုခင်းနှင့်ခြားနားသည်။ ၎င်းတွင်မြစ်လက်တက် ၉၀ ရှိပြီးမြစ်တစ်ခုတည်းစီး။ စီးဆင်းသည်။ Baikal အထိဆိုက်ဘေးရီးယားသို့ရောက်ရှိသည့် Egiin Gol ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ မွန်ဂိုလီးယားအရှေ့ပိုင်းသည် Genghis Khan ၏အကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Deluun Boldog ဒီနေရာမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းကသူမွေးဖွားခဲ့တဲ့အနှစ် ၈၀၀ ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်တုကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ မဟာ Khan ၏ဇာတိမြေများပါဝင်သည် ခန္တီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်သစ်တောများ၊ တောင်များနှင့်တောတောင်ရှုခင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွက်သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် ယူနက်စကိုသည်၎င်းကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
Batshireey soum မှ ၄၅ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောရှေးဟောင်းမြို့ရိုးတစ်ခုရှိသည် ရှေး၏နံရံ, အထဲတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြယုံကြည်သည် ဆယ်သုံးရာစု နှင့်နောက်မှသောအရေးကြီးသောမွန်ဂိုကိန်းဂဏန်းများ၏ 60 သင်္ချိုင်းဂူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Genghis Khan တောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူ့ကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် HugNurr ရေကန်၁၁၈၉ ခုနှစ်တွင် Genghis Khan ခေါင်းစဉ်ကို Temuujin လူငယ်အားသူ့ကိုမွန်ဂိုဘုရင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းငါဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာနှင့်ဆောင်းပါးရှိဓာတ်ပုံများမှမွန်ဂိုလီးယားသည်မမေ့နိုင်သောသဘာဝအလှအပ၏နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်နောင်တမရပါ။ သင်စွန့်စားမှုခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » အဘယ်အရာကိုမွန်ဂိုးလီးယားတွင်ကြည့်ပါ